Ioyile iRubhedu Igumbi lokuhlambela iBhobho yamanzi 4 Inch
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / WOWOW Igumbi lokuhlambela Sink Faucet 4 Inch Centre Ioyile eyiRubhed
WOWOW Bathroom Sink faucet 4 Inch Centre ioyile yebronze
I-WOWOW faucet ye-100 yepesenti UVAVANYO LOKUVAVANYWA-zonke iimpompo zihlalutyiwe phantsi koxinzelelo oluphezulu lwamanzi ukuqinisekisa umgangatho ophezulu kunye nonyamezelo. I-4 intshi yokusasazeka kwemibhobho yokuhlambela, ubunjani obuphezulu bokwakha ubhedu ukuphela kwenkulumbuso eyilelwe ukusebenza koBomi Ubeko lwale mihla
232120RB imiyalelo yokufaka
Iziko lendawo yokuhlambela amnyama iifeksi ze-2321200RB: Ukuba ucinga ngeemveliso zethu zamva, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi ngexabiso lendleko. I-CENTERSET; Uyilo lweflekasi clasque ngentonga yokuphakamisa kunye ne-pop up yokumisa. Igumbi lokuhlambela eline faucet yegumbi lokuhlambela elinemilinganiselo emibini YOKUGQIBELA: Isiphatho sokuphatha kabini sithe ngqo ukulungisa amanzi kunye nokulawula ubushushu bamanzi. UKUHLAZIYA UKUZE USETYENZISWE NGOKUKHUSELEKILEYO KUFANELEKILEYO: Isepha yokuhlambela ioyile yebronze iBronze ibandakanya ukudibana kwendimbi, amanzi avela ngaphandle kwempompo ngokucinezela kwinduku yokuphakamisa, ukuthintela izandla zakho ezihlamba phezulu. CELA I-FAUCET OIL RUBBED BRONZE: ezimbini zokuphatha isitayile se-faucet isitayile se-classic retro. Ukulwa nokudumba. Idesika ebekiwe ye-faucet efanelekileyo yokusebenzela irente, i-condo entsha, i-single-ghorofa, ikhaya leemoto, i-trailer yokuhamba kunye nokusetyenziswa kwekhaya. Nceda unxibelelane nathi ukuba ikhona imibuzo.
I-SKU: 2321200RB iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: igumbi lokuhlambela lokuhlambela, indawo yokugcina iziko, kwigumbi lokuhlambela le-intshi, Ibronze yeBhotile yeoyile
9.2 x 9.1 x 3.9 intshi
Zinc ingxubevange / Stainless
Yeyona nto ndiyithandayo. Inokupakisha okuhle, akukho mvumbo kwinkangeleko, kwaye kulula ukuyifaka. Ixabiso lisengqiqweni.
Umyeni wam wakwazi ukufaka ngokulula! Ndonwabile ngakumbi koku kuthengwa. Ijongeka ibiza kakhulu kunokuba ibinjalo kwaye ndifumana ukuncoma okuninzi kuyo. Umphezulu wenotshi s
Ndoneliseke kakhulu yile faucet. Xa ucima itephu, umazibuthe usebenza kakuhle kwaye unokugcina isitshizi ngaphakathi. Andinasikhalazo malunga nompompo.
Kunzima ukufumana itompu elungileyo yekhitshi engabuyeli mva. Ndisebenzise itompu kuphela malunga neveki ngoku kwaye isebenze kakuhle ukuza kuthi ga ngoku.
Umgangatho omkhulu webhobho yokuhlambela kulula ukuyifaka. Ndiyithengele itshintshi yam itanki lokutshintsha amanzi ingena ngokugqibeleleyo! Ndiyonwabele ngokwenene!
Ukufakwa ngokulula kwaye kujongeka kukuhle! Ukujonga okuhle kakhulu kwisiqingatha seendleko zento onokuyifumana kwiivenkile zokuphucula ikhaya
Kunzima ukubetha le faucet ngexabiso. Ndonwabe kakhulu ngokuthenga kwam.
Ifike ngokukhawuleza kunokuba kuqikelelwe umhla wokuhanjiswa. Ibhokisi ibhalwe kakuhle. Kulula kakhulu ukuyifaka, kwaye ijongeka iklasi kakhulu. Ndithathe indawo yompompo we-Delta, obiza i-4X kakhulu, kwaye le intsha ikhangeleka intle kwaye kwakulula ukuyifaka. UChukumisekile KAKHULU.
Imveliso ebonakala intle kakhulu ekulula ukuyifaka. Ukugqiba kakuhle kwaye kusebenza kakuhle.
Umgangatho olungileyo, uza nempahla entle yokukhusela. Ukuhamba kakuhle kwezibambo kunye nokutshixwa komsele. Singathenga kwakhona kwaye siyifakelwe malunga nenyanga.
Imveliso enkulu !! Ukufakwa okulula ngokulula. Ndiyisebenzise ukubuyisela itepu kwiRV yam kwaye intle kakhulu, ndithenga ngakumbi ukubuyisela iipompo zangasese endlwini yam.
Umgangatho olungileyo, wenzela umlambo omnandi wamanzi, kulula ukukhulula i-aerator, uyilo oluhle. Uqaphele ukuba elinye iqhina likhululekile kunomnye. Kufanele ukuba ilungiswe ngokulula. Lilonke, ixabiso elikhulu leWOWOW ngaphandle kokuphoxeka. Thenga kakhulu!
Ndonwabile ngomgangatho, ukujonga kunye nokulula kofakelo… Oko ndithenge okwesibini kwenye isinki!
Amanzi avuliwe / avaliwe achanekile. Jonga ucocekile kwaye udidi. UTHANDE umjelo wokutyhala! Ilula ngakumbi kwaye isebenza ngakumbi kunendlela endala yokutsala i-lever yokutshintsha!
Ukufakwa kwakulula kangangokuba ndandineminyaka eli-14 ubudala ukuba ndifake (kunye nolawulo lwam kunjalo). Ndonwabe kakhulu ngale ntengo.
Ixabiso liyakhuphisana kakhulu kwaye ndiyayithanda i-strainer yoyilo. Ummoba upakishwe kakuhle nazo zonke iindawo ezikhuselweyo. Umthengisi nceda ungatshintshi ukupakishwa. umsebenzi omhle kakhulu. Andiqinisekanga kodwa ezi zibonakala ngathi zizolile kuneepompo zokugqibela ebendinazo.
Ngokuqinisekileyo intle! Isebenza ngokugqwesileyo. Mde kwaye ufikelela ngaphandle emva koko bendikhe ndadlula. Ukugqibelela kwesicelo sam. Ukugqitywa komgangatho! Hayi iplastiki. Umsebenzi onzima! Ndonwabe kakhulu ngokuthenga kwam!
Le tephu ikumgangatho ophezulu. Ndizamile ukuthenga enye kwaye bonke bahambile. Ndicinga ukuba ayindim ndedwa owayithandayo.
Ndangena endlwini yam entsha eyayinesinki ESENENYANISO. Oku kwakulula kakhulu ukuyifaka kwaye kubonakala kumangalisa!